0 Saturday February 22, 2020 - 09:50:31
Waxaa si rasmi ah wadanka Afghanistan uga dhaqan gashay Xabad joojin udhaxaysa imaarada Islaamiga Afghanistan (Taliban) iyo dowladda Mareykanka.
0 Thursday February 20, 2020 - 19:23:48
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib ugua bilaawdeen waqooyiga wadankaas.
0 Wednesday February 19, 2020 - 20:57:18
Cudurka dilaaga ah ee Karoona ayaa wali kusi fidaya wadanka Shiinaha ee dhaca qaaradda Aasiya.
0 Tuesday February 18, 2020 - 11:13:58
0 Sunday February 16, 2020 - 11:45:35
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in markale sawaariikh lagu weeraray dhismayaal melleteri oo dowladda Mareykanka ay ku leedahay gudaha magaalada caasimadda ah ee Baqdaad.
0 Saturday February 15, 2020 - 21:59:42
0 Saturday February 15, 2020 - 21:10:03
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay dhulka soo dhigeen diyaarad nuuca dagaalka ah oo ay laheed dowladda Sacuudiga ee qeybta ka ah isbahaysiga duullaanka ku qaaday wadanka Yemen.
0 Saturday February 15, 2020 - 11:12:13
0 Thursday February 13, 2020 - 20:30:16
Cudurka dilaaga ah ee Karoona ayaa dadkii ugu badnaa maalin qura ku dilay wadanka shiinaha ee dhaca qaaradda Aasiya.
0 Thursday February 13, 2020 - 10:28:57
Ku dhowaad hal qarni ayaa kasoo wareegtay markii uu dhulka muslimiinta Turkistaanta bari uu ku dhacay gacanta dowladda Shuuciyadda Ruushka.
0 Wednesday February 12, 2020 - 19:23:06
0 Monday February 10, 2020 - 20:20:36
0 Monday February 10, 2020 - 11:34:47
Waxaa sare usii kacaya halista uu geysanayo cudurka halista ah ee Carona Virus oo si aad ah ugusii dhax faafaya bulshada dalka Shiinaha.
0 Saturday February 08, 2020 - 10:57:28
Weerar lagu gubay dhuun Gaaska qaadda oo ka dhacay Gobolka Saynaa Wadanka Masar.
0 Monday February 03, 2020 - 09:41:47
Wararka ka imaanaya wadanka Masara ayaa sheegaya in qarax xooggan lagu beegsaday mid kamida dhuumaha Gaaska ee Yahuuddu leedahay.
0 Sunday February 02, 2020 - 11:46:09
0 Sunday February 02, 2020 - 11:42:09
Dibad baxyo ballaaran ayaa dib uga qarxay wadanka Ciraaq saacado kadib markii lamagacaabay R/wasaare cusub oo ay yeelanayso xukuumadda shiicadu ku badantahay ee ka jirta magaalada Baqdaad.
0 Wednesday January 29, 2020 - 12:02:23
0 Wednesday January 29, 2020 - 11:16:07
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay soo heshay Meydadka laba kamid ah ciidamadii American-ka ahaa ee ku dhintay diyaarad maalin ka hor lagusoo riday bariga wadanka Afghanistan.
0 Sunday January 26, 2020 - 21:35:22
0 Sunday January 26, 2020 - 14:03:40
0 Saturday January 25, 2020 - 12:27:34
0 Saturday January 25, 2020 - 10:33:27
0 Thursday January 23, 2020 - 12:26:11
Wararka ka imaanaya wadanka Australia ayaa sheegaya in askar American ah ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay dhulka Keymaha wadankaas oo dab xooggan uu ka kacaya.
0 Tuesday January 21, 2020 - 12:41:28
0 Monday January 20, 2020 - 20:58:06
0 Sunday January 19, 2020 - 10:55:09
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal jihaadi ah oo jamaaco islaami ah dhowaan ka fulisay wadanka Nejeeriya ee dhaca galbeedka qaaradda afrika, wararka ka imaanaya Nigeria waxay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof oo ay kamid yihiin mas'uuliyiin dowladeed ay ku dhinteen weerarka oo ka dhacay gobolka…
0 Saturday January 18, 2020 - 10:50:15
0 Thursday January 16, 2020 - 17:14:36
Wararka ka imaanaya wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo aan heybtooda lagaran ay weerar ugeysteen Sheekh Daaci caan ka ah caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika.
0 Thursday January 16, 2020 - 12:21:14
Dagaallo culus ayaa markale dib uga qarxay waqooyiga wadanka Suuriya kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Bishaar Al Asad oo isku dhinac ah iyo xoogaga mucaaradka Sunniga ah.
0 Wednesday January 15, 2020 - 07:50:25
« Prev1 ... 3456789 ... 41Next »